Fiofanana momba ny alika, karazana ary fototra | Alika Manerantany
Fiofanana alika, inona no ho fantatra
Rehefa hitondra alika vaovao hody isika dia tsy maintsy jerentsika ny anton-javatra rehetra ary ny iray amin'izy ireo dia miorina amin'ny tsy maintsy hanomezantsika azy fampianarana, izay hampiasaintsika ny fiofanana alika. Ity fiofanana ity dia ampahany lehibe amin'ny fiainan'ny alika, noho izany dia tsy maintsy manana fiheverana farafaharatsiny isika.
Hiresaka momba ny fiofanana isika, karazana fiofanana ary inona no tsy maintsy ataontsika mba hampiofanana ny alika. Ampahany tena lehibe amin'ny fanomezana fanabeazana tsara anao.
1 Fototra fampiofanana momba ny alika
2 Fiofanana sy fanabeazana
3 Famantarana fitoniana
9 lany tamingana
10 Mampiofana amin'ny fanamafisana tsara
Fototra fampiofanana momba ny alika
Rehefa miresaka momba ny fiofanana momba ny alika dia mila mazava tsara momba ny hevitra fototra sasany izay manampy anay hahatakatra ireo fomba maro ananantsika hahazoana fiofanana tsara ho an'ny biby fiompinay. Amin'izany no hahafahantsika mampiasa ny iray na ny iray hafa ary hahafantarantsika izay ataontsika sy ny fomba hanaovana izany, satria tsy misy fomba iray na teknika mitombina hampiofanana alika.
Ny fiofanana dia mitovy amin'ny fanabeazana alika fa tsy mitovy mihitsy. Rehefa miresaka momba ny fanabeazana canine isika, dia miresaka momba ny fampianarana ny alika misy fitsipiky ny fiaraha-miaina ary mifampiresaka amin'ny tontolo iainany, izay azo atao amin'ny alàlan'ny teknika fianarana. Raha ny fiofanana momba ny alika dia lasa lavitra kokoa isika, satria ny alika dia afaka ampianarina, nefa tsy hozarina amin'ny toetra sasany. Ny fiofanana dia a fanofanana ho an'ny alika hahazoana fahaizana manokana na afaka manao fanazaran-tena sasany. Izy io dia hevitra lehibe kokoa sy feno kokoa noho ny fanabeazana.
Ny alika dia manana ny fiteniny ary izany dia zavatra tokony hianarantsika handika raha toa ka te hifandray amin'izy ireo isika. Matetika isika mieritreritra fa izy ireo no mila mampifanaraka antsika, fa ny fahalalana ny fomba fifandraisan'izy ireo dia hanampy antsika hanatsara ny fotoam-pampiofanana sy ny fiaraha-miaina. alika mamoaka famantarana milamina izy ireo mba hampisehoana amintsika fa misy zavatra ampiasan'izy ireo amin'ny zavatra iray ary tian'izy ireo hilamina isika. Izy ireo dia mety ho famantarana samihafa, toy ny fofonaina ny tany, ny fijerena lavitra, ny fampisehoana ny kibo, ny fikitroha na ny milelaka ny molotra. Hahafantatra raha a famantarana tony tsy maintsy jerentsika ny sahan-keviny ary hahafantarantsika ny fomba ifandraisana amin'izy ireo.
Latency no vanim-potoana izay lasa eo anelanelantsika manome ny baiko ary ny alika no manatanteraka azy. Raha tsara ny fanazaran-tena ataontsika dia hihena hatrany io vanim-potoana io mandra-pahatongan'ny fotoana fohy. Ity vanim-potoana ity dia fomba iray handrefesana ny fandrosoana rehefa mampiofana ny alikantsika, noho izany dia zavatra tsy maintsy refesintsika raha te-ho mazava ny fandrosoana ataontsika amin'ny tranga alika izay sarotra ny mianatra.
El clicker kilalao fampiofanana io izay voaporofo fa tena mandaitra. Ny zavatra ataony dia marika ireo fihetsika mety amin'ny alika mba hanatanterahana azy ireo hatrany hatrany. Ny feo mazava sy fohy an'ny clicker dia manampy ny alika hanavaka ireo fihetsika izay irina. Ny clicker dia matetika ampiasaina rehefa mitranga ireo fihetsika ireo ary ampiharina ny valisoa aorian'ny clicker. Amin'izany fomba izany ny alika dia mampifandray ity feo ity amin'ny zavatra tsara ary manatanteraka ny fihetsika hahatratrarana ny feo clicker. Karazana fiofanana tsara izany.
El fanamafisana dia mety ho tsara na ratsy. Ny fanamafisana tsara dia valisoa omentsika ny alika rehefa manao fihetsika faniry izy mba hamerenany azy. Ny fitsaboana dia tsy maintsy omena avy hatrany aorian'izay mba hampifandraisan'ny alika azy roa. Raha misy ny fanamafisana ratsy, na dia tsy endrika fampiofanana mety aza izany dia ny fanomezana sazy rehefa manao fihetsika ratsy ianao mba tsy hamerenanao azy.
El ny fotoana dia ny fotoana mandalo eo anelanelan'ny alika manao ny fihetsika sy mahazo ny fanamafisana. Ny fotoana dia tsy maintsy ho fohy dia kely mba hahafantaran'ny alika izay fihetsika tokony haverina. Tsy tokony hihoatra ny dimy segondra izany ary miresaka momba ny fampiasana ny clicker na fanomezana loka isika.
Ity iray ity tsy ny endrika fianarana tiana indrindra, satria raha mampiasa fanamafisana tsara isika dia ho voalanjalanja kokoa ny alika. Tsy tokony hampiasaina amin'ny alika izay matahotra sy phobias izany. Ny sazy dia ny fijanonana amin'ny fanomezana zavatra tadiavin'ny alika, toy ny valisoa, sazy noho ny tsy fanarahana na fanaovana fanitsiana rehefa nanao zavatra tsy mety ny alika.
Fandripahana dia misy aza mihaino ny alika intsony rehefa tiantsika izy hitsahatra tsy hanao fihetsika manokana. Zava-dehibe izany rehefa fantatsika fa ny alika dia manao zavatra mba hisarihana ny saina, toy ny fangalarana na ny fitsakoana zavatra.
Mampiofana amin'ny fanamafisana tsara
Ity dia iray amin'ireo fomba tena atolotra indrindra rehefa mampiofana ny alika. Manana tombony tena tsaraSatria tsy tokony hiondrika ara-batana ilay alika, dia fomba tsotra sy haingana izay tena mahafinaritra ny alika ihany koa, ka mahatonga azy ireo hatoky antsika bebe kokoa. Manamafy ny fifandraisana sy ny fifamatorana eo amin'ny tompona sy ny biby fiompy.
Amin'ny fanamafisana tsara ny zavatra ataontsika dia omeo valisoa ny alika rehefa manao fihetsika irina izy, ilay tadiavintsika amin'ny fihetsika rehetra ataon'ny alika. Tokony homentsika haingana izany fanamafisana izany rehefa manao ny fitondran-tena, satria amin'io no hampifandraisan'ny alika ireo zavatra roa ireo. Rehefa manome ny baiko isika dia hitaky ny alika ny valiny ary hanao ilay fihetsika nomentsika valisoa indray. Rehefa mandeha ny fotoana dia mila mijanona tsy manome an'io valisoa io isika mba hahafahan'ny alika manatanteraka ny baiko fotsiny satria izy no nampiditra azy io. Tsara ny manova ny valisoa, manome sakafo na sakafom-biby, ka tsy hanantena foana ny alika.
En imbetsaka ny clicker no ampiasainasatria mora kokoa amin'ny alika ny mahatakatra an'ity rafitra ity. Raha tokony hanatrika ny loka isika dia mampiasa ny clicker rehefa tanterahina ilay fihetsika, manamarika azy amin'ny fomba mora sy haingana. Izany no nahatonga azy io ho lasa fitaovana tsara ho an'ny mpampiofana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fiofanana alika, inona no ho fantatra
Ahoana ny fanesorana ny fatotra amin'ny volon'ny alika rano?